Colaad ayaa ka dhex jirta Dowladda Federaalka ah iyadoo Ciidamaeedi qaarkood dhufeyso waaweyn ka shameysteen Xaafadda Shiirkoole ee Degmada Hodon halkasoo ay joogaan Ciidamo ka amar qaata Taliyihii horee Baliiska Gobalka Banaadir Saadaq joon oo Madaxweyne Famraajo xilkii iyo derejooyinki Ciidanba ka qaaday. Ciidamadaan ayaa xirtay jidadka Xaafadda soo gala […]
Gudoomiyihii Degmada Xamar jajab ee Magaalada Muqdisho ee Dowladda Federaalka ah ayaa Xalay lagu dilay agagaarka Deegaanka Sarkuusta oo Muqdisho ka tirsan una dhaw Ekis koontarool Afgooye. Dilka Gudoomiye Maxamed Cabdi Axmed Xayle waxaa ka soo baxaya warar kala duwan welina ma jirto cid sheegatay Mas’uuliyadiisa, waxaa dilkiisu ku soo […]
Ciidamada Xarakada Shbaabaul Mujaahidiin ayaa Xalay weerar fool ka fool ah ku qaaday Ciidamo ka tirsan Dowladda Federalaka ah oo ku sugan Deegaanka Tareedisho ee Magaalada Muqdihso u soo xiga dhanka Afgooye, in mudda ah ayuu halkaa dagaal ka socday waxaana la maqlayay diryaanka hubka la is weydaarsanaayay oo u […]
Ciidamadii Dowladda Federaalka ee ku suganaa Deegaanka Bacaad weyne e Gobalka Mudug ayaa Xalay Cagaha wax ka dayay waxana u kala carareen Magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado ee Gobalada Mudug iyo Galgaduud. Ciidamadaan oo watay 21 Gaari oo kuwa dagaalka ah ayaa ka baqay in Xarakada Shabaabul Mujaahidiin weerar ku soo […]
Xaaladda Magaalada Muqdisho ayaa yara degan iyadoo laga cabsi qabo goor waliba in iska hor imaadyo ka dhacaan maadaama ay ku sugan yihiin Ciidamo iska soo horjeeda oo hub fara badan ku raran. Dowladda Federaalka ah ayaa Xalay Ciidamo hor leh wadooyinka ku soo daadisay ka gadaal Markii Taliyihii hore […]
Weeraro iyo qarax Xalay dhacay
Ciidamada Xarakda Shbaabul Mujaahidiin ayaa Xalay Ciidamada Kenya ee Fariisinka ku leh Deegaanka Hosingow ee Gobalka Jubada hoose. Dagaal ayaa Muddo halkaa ka socday waxaana la isweydaarsaday ama la isku dhaafsaday hubka noocyadiisa kala duwan inkastoo aanaan faah faahin dhameystiran ka helin wixii khasaare ah ee Kenyaatiga la gaarsiiyay. Weerar […]
Janaraal ka hor yimid Waqti kororsiga Madaxweyne Farmaajo.
Jananaraal ka tirsan Ciidamada Fedederaalka ayaa ka hor yimid waqti kororsiga Madaxweynaha Dowladda Federaalka ah Maxamed Cabdulaahi farmaajo. Janaraal koronto oo Saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in aanay akhbaleyn tilaabda Farmaajo uu qaaday ee la xariirta in uu kursiga ku sii fadhiyo ayna ka go’an tahay in ay Muqdisho la […]